प्रेममा अघि बढ्‌नुहोस्। – Shalom Nepal
प्रेममा अघि बढ्‌नुहोस्।
Posted on August 3, 2020 August 3, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – हामिहरूको जिवनमा यस्तो समय पनि आउनेछ कि जब तपाईंसँग केहि दिन बाँकी हुदैन, तर आझै पनि तपाईं वरपरका व्यक्तिहरूले अधिक मात्रामा तपाइँबाट आश गरिरहेका छन्। तपाईं आफ्नो बुद्धिको अन्तमा हुनुहुनेछ किनकि तपाईंले पहिले नै धेरै बाढिसक्नु भएको छ। तर येशू ख्रीष्ट तपाईंलाई याद दिलाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईं प्रेममा बढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वोर सबै मानिसहरूका लागि तपाईं प्रेममा प्रशस्त भएको चाहनुहुन्छ।
पहिलो थेसलोनिकीहरूको यस खण्डमा पावल त्यहाँको चर्चको निम्ति प्रार्थना गर्दैछन, त्यहाँका मानिसहरू प्रेममा बढेको पावल चाहान्थ्यो । यो होइन कि उनीहरूमा प्रेमको कमी थियो, तर यसको विपरित थेसलोनिकीका मानिसहरू ले अरूलाई धेरै प्रेम गर्थे। यसले हामीलाई देखाउँछ कि हामी प्रेमको क्षेत्रमा बढ्न कहिल्यै रोकिदैनौं।
कहिलेकाँही प्रेमको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन माया होइन तर बलिदान हो। पावल सिलास र तिमोथीसँग एथेन्समा थिए, तर उनीहरूले तिमोथीलाई थेसलोनिकाको चर्चमा सेवा गर्न पठाइदिए। ऊ त्यहाँ परमेश्वरले के गरिरहनुभएको छ भन्ने कुराको उत्कृष्ट रिपोर्टको साथ फर्किएको छ, पावलले उनीहरूलाई प्रेममा बढन आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूले राम्रो काम गरिरहेका थिए र त्यस प्रकारको कामलाई निरन्तरता दिन पावल उत्साह दिदै हुनुहुन्छ।
हामी सबै एकले अर्कालाई प्रेम बाढन सक्छौं। हामी यसलाई कती देखाउन सक्छौं त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसैले हामीले आफ्नो प्रेमको क्षमता बढाउनको लागि परमेश्वरलाई सोध्नु आवश्यक छ। जब हामी भाग्छौं वा प्रेम दिन सक्दैनौं, हामीले हाम्रो प्रेमको स्रोत, येशू ख्रीष्टबाट लिनु पदर्छ।
जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौं त्‍यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एकले-अर्कासँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्‌ने र प्रशस्‍त भइरहने तुल्‍याऊन्, १ थेसलोनिकि ३:१२
येशू ख्रीष्टलाई भेट्न तयार रहनुहोस।
Posted on June 7, 2020 June 7, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – के तपाई तयारि हुनुहुन्छ? हामीलाई तयारि रहनको लागि पूर्ण चेतावनीको साथ माथिबाट यो आवाज आई सकेको छ। जसको सल्लाहले हामि सबैलाई चौकाउने लाग्न सक्छ ?हामीले यो जान्नु आवश्यक छ कि अब हामि केहि समय पछि महान न्यायाधीशको अगाडि उभिनु पर्छ, जुन समयमा तपाई केवल गुंगा र अलमलमा पर्नुहुनेछ। तपाई त्यो समयमा केवल […]
Posted on August 5, 2020 August 5, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – पावलले हामीलाई असल कुराको लागि स्वर्गीय दिमागमा बस्न सलाह दिदछ । यस पृथ्वीका चीजहरूले तपाईंलाई निराश तुल्याउन सक्छ। हाम्रो आशा येशूमा छ, र उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने हाततर्फ बसिरहनुभएको छ। त्यहाँ हामीले आफ्नो दिमाग केन्द्रित गर्न बाइबलले बताउदछ । यहाँ कलस्सीवासीहरूमा मण्डली बढ्दो रुपमा बृद्दि भैरहेको थियो, र पावलले उनीहरूलाई जीवनका आवश्यक […]
केहि समयको लागि!
Posted on June 13, 2020 June 13, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – प्रियहरू हो, एफ बी मेयरको यी शब्दहरू विचार गर्नुहोस्। जुनकुराहरूले तपाईंको कठिनाइको समयमा सान्त्वना दिन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा हामीले यो बिर्सिरहेको हुन्छौ कि हाम्रो दु: खको सीमा छ, यो केहि समयको लागि हो। तर हरेक क्षण परमेश्वोरको अपरिवर्तनीय उद्देश्य र प्रेम द्वारा निश्चित गरिएको छ। हेर्नुहोस त, अन्धकारको घडी सटीक मापनको साथ […]
यो बाटो हिड्नुहोस।
How Term Paper Writing Services Will Help You to Get the Most Out of Your Paper
Posted on November 23, 2020 November 23, 2020 Author shalomnepal
Posted on November 22, 2020 November 22, 2020 Author shalomnepal
Posted on November 20, 2020 November 20, 2020 Author shalomnepal
Posted on November 23, 2020 November 23, 2020 Author shalomnepal	Comment(0)
If you will need an superb academic article, you want an expert at it and you want them now! That is why word paper writing services started offering term paper writing services, so that those who understand what it is like to compose one can provide their particular expertise. And every timeabig portion […]
Posted on November 22, 2020 November 22, 2020 Author shalomnepal	Comment(0)
Posted on November 20, 2020 November 20, 2020 Author shalomnepal	Comment(0)
How Term Paper Writing Services Will Help You to Get the Most Out of Your Paper November 23, 2020
Basic Tips For Essay Writing November 22, 2020